Jowhar.com : Somali Leader News - News: Markana waa sheekadi cusbeeyd ee Samir caanshaq sad ma leeyahay waana qeybtii 30 aad.
April 23 2014 14:08:02
Markana waa sheekadi cusbeeyd ee Samir caanshaq sad ma leeyahay waana qeybtii 30 aad.
Ifraax markii ay intaa tiri ayaa ay istaagtay Maxamed inta uu ka dawa kacay ayaa uu ku yiri
Waa ku baryaa fadhiiso waan I fahmi karnaa hana qeylinin sida dad waa weyn aan u hadalno
Nin weyn waxaa ah kan masuuliyada qaadi kara laakiin ciyaalka waad ka liidataa nafteydana kuguma aamini karo fadlan tasho waan kaa tashtee.
Oo maxaad I leedahay qof kale ayaa nolosheyda ku jirta
Doqonyahow miyaan ku sugi lahaa
Ifraax sidaan waad igu dulmineysaa
Ifraax inta ay qososhay ayaa ay tiri
Waad I dulmineysaa oo kaalay markaad wadaantii caashaq aad igu keli yeeshay sow ima dulminin Maxamed dantaada garo aniga teyda ayaan raacay.
Aniga waxaan ku maqnaa teena dartaa ayaan nolol adag u maray taa ma ogtahay
Aniga intaa oo dhan kaama rabin runta in aad ii sheegto ayaan rabay anigaana diyaar u ahaa in aad sariirteyda ila seexato mar hadaad reerkaaga ay jaceylkeena gargaari waayeen marnaba reerkayga kuma diidi laheyn nolosha meesha hoose ayaan si wadajir oo kalsooni ku jirta ugu wada bilaabi laheyn waana hubay waan ku guuleysan laheyn laakin Macal Asaf lacag ayaad nolosha mooday intaa in ka yar ayaan ku warsan lahaa doqoni calaf ma leh.
Ifraax sidaas igama tagi kartid mana noolaan karo la�aantaada aaway jaceykeena
Waan ka xumahay jaceylkaan xaabada ku daray ayaan la soo xadreyneysaa waan sii hoyanayaa nabadey
Ifraax markii waa ay istaagtay intu gacanta qabtay ayaa ay iska filiqday oo ay banaanka u soo baxday Maxamedna ka soo baxay Farxiyaoo barandada jiifta ayaa u arkay oo u tagay oo ku yiri.
Waa ku baryaa Farxiya la hadal Ifraax aniga nin xun ma ihi daruuf ayaa I heyesay oo la ii waayey maantana nin soo shaqeystay oo iyada ku filan ayaan ahay guurkeedana diyaar ayaan u ahay wax alla waxa ay rabto ha I warsato.
Farxiya oo aan weli hadal oran ayaa Ifraax hadashay oo tiri
Ugu yaraan dantiisa ha fahmee u sheeg Farxiya in ay xilli dambe tahay yuusan xaafadiisa ka daahin magaalada ma wanaagsanee.
Waa runteed Maxamed Maalmahaan dhaca waa batay fadlan xaafada aad Maxamed yare:
Laakiin Dumaashi la hadal habeen dambe ayaan soo noqonayaa u sheeg in aan danteena ku maqnaa
War aniga waqti kuuma haayo daneyso habeen dambana ima arkeysid
Farxiya aniga waan imaanayaa sina kagama haraayo Ifraax Farxiya:
Ifraax kani waa gurigeeda xilli kasta waad ka helee ee iska bax hadda yaanan meelahaas lagu helinee Maxamed yare:
Ok Farxiya waan baxayaa laakiin Ifraax ka fikir wax walba nin daacad kuu ah ayaan ahay I aamin
Maxamed yare warkii Farxiya ayaa uu maqlay oo uu xaafadiisa aaday Ifraax si ayay isugu dhex yaacsaneyd waa ay ka cudur daaratay saaxiibteed waxayna ku tiri beri ayaan sheekeysan doonaa markii ay ilinka gaartay ayaa ay inta soo noqotay ayaa ay ku tiri.
Ilyaas waa uu ku saamaxay waana u sheegay in aad ka xun tahay maalintii sida aad u eedeysay raali inuu kaa yahay ayaa uu ii sheegay macmacaankaas waa igu soo dhiibay.
Miyaadan macmacaanka waxba ka qaadaneynin
Qeybteyda waan soo reebtay markii horeba labo qeyb ayaa uu ku keenay
Ok saxiib beri ayaan sheekeysan doonaa
Hagaag habeen wanaagsan
Ifraax xaafadooda ayaa ay abaartay iyada oo weli ku mashquulsan arrinta Maxamed yare ayaa waxaa u soo dhacay Msg misana waa Ilyaas oo ku leh waan nabad tagay markiiba waa u celisay oo ay ku tiri Habeen wanaagsan.
Ifraax habeenkaas waqtiga soo jeed ayaa uu ugu baryey mar ay salaadii subax tukaday ayaa ay hurdo heshay waxaase wax yar kadiba msg ku kiciyey Ilyaas oo ereyadaan u soo qoray.
MARLI IYO MOWD MOWLAHEY HA KAA HAAYO
MAMIIR QABTAA OO MA SOO NABAD KACDAY
Ifraax markii ay miraha aqrisay ayaa ay dhoolacadaysay oo ay markiiba ugu jawaabtay
Markaan waad iga badisay waase kuu nabad qabaa huradana adigaa Iga toosiyey
Ilyaas nin heelan ayaa uu ahaayee markiiba waa soo jawaabay oo ku yiri.
Oh ma dooneynin in aan hurdada kaa qaso ii seexo macaanta markaad soo toosatana adiga I soo wac hadalkaada ayaa irsaaqad I ah bye macaanto.
Ifraax markiiba sariirta kuma sii raaginee suuqa ayay aaday oo quraacdii aabaheed diyaarisay markii ay howshii guriga kala ratibtay ayaa ay ILyaas wacday oo ay ku tiri.
Hello wiilka jaceylka uu waalay
Ilyaas inta uu qoslay ayaa uu yiri Ilyaas:
Inta aan codkaaga heysto waalida waa ay iga fogtahay
Jowhar.com729,017 unique visits